Musoro mutsva we KDE OpenSuse 12.3 | Kubva kuLinux
Musoro mutsva we KDE OpenSuse 12.3
satan AG | | Chitarisiko / Kuita munhu, GNU / Linux
Ini ndakangoona kuti yagadzirira (zvirinani kuti uone) dingindira idzva richapfeka OpenSuse mushanduro 12.3 ine desktop nharaunda KDE. Ini ndinofanira kutanga ndataura pane izvo zvese, kuti ndakaiwana yakanaka kwazvo, unogona kuona basa revagadziri nekuti mhedzisiro yacho, zvirinani izvozvi, yakapukutwa kwazvo.
Sezvo isu tichiona iri yakanaka kwazvo.
Iyo tray system inotaridzika zvakanyanya kusimba, uye ma icon acho akanaka kwazvo.
Sezvatinogona kuona, dingindira rinotaridzika kwazvo mumaonero aro ese. Ini ndawana iri sober, yakashongedzwa uye inopa yakanatswa uye yakakomba kubata kune iyo kugovera. Nekudaro, pane uyu musoro wenyaya zvinhu zviviri zvinojekeswa:
Dingindira rakagadzirirwa kunyanya ku KDE 4.10, saka haigone kutaridzika zvakakwana mu KDE 4.9;
Iyo default Wallpaper haina kusarudzwa izvozvi.
Zvirinani izvozvi tinofanira kumirira kuti tiise maoko edu pazviri….
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Musoro mutsva we KDE OpenSuse 12.3
Zvakanaka kwazvo, ndatenda nekuunza kwatiri. Is OpenSuse iyo distro ine yakanakisa KDE kusangana? Ini ndinotaura izvi nekuti handisati ndamboishandisa uye kana ndikazonzwa kuda kuyedza. iyo nguva chete yandakazvitarisa makore apfuura ... zvakandikunda mumaminetsi gumi ndokuzvitora. Handina kuwana chinhu.
Ini handinyatso kuziva nekuti ini ndashandisa KDE neDebian uye neOpenSuse. Neyekupedzisira ndinogona kukuudza kuti kusanganisa kunoitika, zvese zviri munzvimbo yacho, zvese zvakanaka kwazvo.
NaDebian hapana kubatana kukuru asi iwe unogona kuwana mibairo yakanaka kwazvo nekuwedzera kuyedza.
Chokwadi chiri CHAKANAKA CUTE. Kumirira ELAV kuti iite gwara rekusiya KDE zvakafanana mu3… 2… .1
Hahaha, kwete. Ndichiri kugadzirisa zvakanaka KDE ElementaryOS Style 😀
Paunopedza usakanganwa kuisa giraidhi tinogona kuifarira
Nekuda kwekukanganisa ini handikwanise kumisikidza posvo, asi ini ndanga ndakanganwa kudonongodza kwayakabva ese ari maviri mifananidzo neruzivo:
Chikwata cheOpenSuse chagara chakamira pachena nekuda kwekuchengetwa kwavanoisa muhunyanzvi hweKDE. Ndichiri kurangarira kuti kwaive nekushongedzwa kwemahwindo akaunza chameleon (handizive kana kuchine dingindira rakadai), iro rakapa kunaka kukuru uye kuzivikanwa. uye ino tema tema inoratidzika seyakanaka, kurarama kusvika padanho reiyo distro.
Wakazviziva kupi? unogona kuisa chinongedzo here?
Munyori anoisa sosi mune yakataurwa pamusoro apa. Ini ndinofanira kugadzirisa iyo posvo kuti iise zvakadaro .. 😉
Musoro wacho wakanaka, asi iyo icon theme yemafolda eaya azvino maKDEs akashata zvakashata, zvakashata zvakashata kwete, kupfuura zvakashata, mhosva yekuona ... ko hapana munhu muKDE zviziviso?
Ndinobvumirana. Chinhu chekutanga chandinogara ndichiita mushure mekumisikidzwa kwakachena mu KDE kushandura iyo Oxygen icon theme, nekuda kwekutyisa kwemafaira emifananidzo. Shanduro dzekare dzaive nekupedzisa kukuru kwehunyanzvi, dzakakwenenzverwa uye dzakanaka kwazvo, asi kubvira pakuvandudzwa kupi? seti yemifananidzo ... tenda kunaka kune MIB-Ossigeno-Icons, KFaenza kana ROSA Icons pakati pevamwe.
OpenSuse yanga iri KDE distro kwenguva yakareba .. Iyo mifananidzo yainayo inonakidza, ndinoida ..
Chokwadi chakanaka uye izvi zvinoita kuti KDE itaridzike yakatonyanya kunaka, iyo yatove yakanaka. Ini pachangu, ndinofunga vakomana vari kuvhuraSUSE vakatora nguva yakareba kugadzira dingindira iro raizopa KDE hunhu uye kusangana neGecko.
Ini ndaikurudzira kuti mablues anyangarike uye anyatso tarisa pane girini, nekuti iri ndiro rakasarudzika ruvara rweiyo distro uye mumaonero angu ingangove yakazara yakazara KDE.
Ah hongu, rwiyo urwu runondiita kuti ndide kusiya wandinofarira distro, Fedora, panguva iyoyo.
Hmm… Ini handinyanye kupindwa muropa nemitauro yakasviba yeVista-asi kana iwe uchida ino yakavhurikaSUSE theme iwe ungadewo izvi, zvese zvinogadzikana kubva mukati me KDE kana kuburikidza ne KDE-Look.org:
Rima_Suse (rakanakisa rakasviba ganda rakabviswa pamwe neakavhurikaSUSE branding)
Ronak (yaive yepamutemo Chakra theme)
Kunyangwe ini ndichifarira zvimwe kupfuura vamwe, pane zvinogara zviripo izvo zvisingandibvumidze, kunyanya zvine chekuita netreyi bar bar.
Moderate versionitis akadaro
Pakati pe6 Distros iyo inogovera nzvimbo pane yangu hard drive, ndiyo yandinofarira padiki .. Asi zvakadaro, HANDIGONI KUSIYA !!
Ndichiri kuchida !! hehehe .. Kumirira 12.3 ..
Kupindura Moderate Versionitis
«Pakati pe6 Distros iyo inogovera nzvimbo pane yangu hard drive»
Uye iwe unoitei nezve zvese izvo!? Uri kuedza kusarudza kuti ndeipi yekuchengetedza!? Nei usingashandise chaiwo michina panzvimbo pezvivakwa zvepanyama!?
Ndatokuudza murume. Chinja rako remadunhurirwa reacute versionitis.
Ini ndinoshandisa VirtualBox yakanyanyisa kugadzikana, zvakakodzera kuti usape kuita kwakawanda, asi dai zvisiri ndaisazoona mamwe madhiri kunze kwehusimbe.
Ehh ehh, avo vedu vane acute versionitis ndivo vapfuri!
Ndiri kufara neOpenSUSE, kugovera kwakandisiya ndangariro dzakanaka kunyangwe ndiri kure neGNU-Linux kwenguva yakati rebei ikozvino.
Ini ndinofunga zvakafanana neavo vanotaura kuti zvidhori zvakati zvapererwa nenguva maererano nenyaya iyi
Kure kubva kuGNU / Linux nei uye mupfungwai?
@VaryHeavy Ndiri kushandisa Windows nomwe pabhuku rakakweretwa.Muchina wakauya neiyo pre-yakaiswa OS uye kutaura chokwadi inoshanda chaizvo.Nechikonzero ichocho ini handiende kazhinji kuburikidza neiyi blog kana maforamu, pano neapo ini ndinoshandisa iyi Debian kubva iro basa ratove nemakore matatu uye richiri kuramba richishanda senguva dzose kunyangwe dhiraivhu rizere.Moyo wangu uchiri Linux, asi ndinofanira kubvuma kuti ndine zvakawanda zvandinetsa munguva yekupedzisira yekugadzirisa system zvakare kubva pakutanga.
Kana ndikadzosera distro ini ndaizendamira ndakananga OpenSUSE iyo kunyangwe ndanga ndakagadzirira kushandisa yaizogona kurwa nerumwe rudzi rwechinetso chekuisa posvo uye ini ndine musoro wangu kumwe kunhu.
Inotaridzika kunge yakanaka, ndinoifarira! Zvakaipa isu hatichakwanise kuzviratidza.
Blogger Mobile App yeApple uye iOS Yakagadziridzwa